New Release games, weekly – REDPlayer
အကုန်လုံးကတော့ Steam တစ်ခုတည်းကပဲမဟုတ်တော့ဘူး။ တစ်ချို့ အင်အားကြီးတွေက Steam ကိုထည့်တွက်တာမဟုတ်ဘူးလေ။ EA ရဲ့ Star Wars ကိုထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဆော့ဖြစ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်။ multiplayer မရသေးတဲ့ နေရာရောက်နေခဲ့ရင်တောင် single-player ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။
Okie… အရင်ဆုံးပြောထားမယ်၊ စာရေးသူမှာ ဘာအမွှေးမှလည်းပေါက်မလာဘူး၊ gay လို့ပြောရအောင်လည်း အဲ့လောက်တော့မသိသာပါဘူး 😛 ၊ ဒီဂိမ်းက အမွှေးထူထူနဲ့… အဲ…. အဲ့ဒီ ကြောင်ဝိဥာဉ် ၃ကောင်နဲ့ သွားရမဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးပါ၊ ဇာတ်လမ်း တစ်ခုပဲဆော့လို့ပြီးသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ဇာတ်လမ်းကစား သူတွေအတွက်ကတော့ ကောင်းပါ၏ ။ နောက်ခံ သီချင်းတွေလည်းမိုက်တယ်။ တရုတ်စာဖတ်တတ်ရင်တော့ ပိုကောင်းပါတယ်။ Eng ဘာသာပြန်ပေးထားတာလည်း နားလည်လွယ်မှာပါ။ Taiwan အကြောင်းလည်းသိရတာပေါ့။
ပစ်မယ်ခတ်မယ် ထွက်ပြေးမယ်ဆိုသူတွေအတွက် ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Single-player ဖြစ်ပြီးတော့ multiplayer ဖြစ်လာစေချင်တဲ့ ဂိမ်းလေးတစ်ခုပါ။ early access တုန်းက ဆော့ထားပြီးသား သူတွေလည်းရှိပါလိမ့်မယ်။ သေချာတာကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ လအတော်အကြာက early access နဲ့လက်ရှိမှာ အတော်လေးကွာသွားပါပြီ။
တစ်ချိန် 2005 လောက်တုန်းကထွက်ခဲ့ဘူးတဲ့ classic မဟုတ်ပါဘူး။ လတ်တလောမှာ microtransition ပြသနာတွေနဲ့ EA၊ စိတ်ပူနေတဲ့ Disney၊ စိတ်တိုနေတဲ့ player တို့ရဲ့ Star Wars Battlefront II ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမှာတော့ သူ့ရဲ့ official site ကိုညွှန်းပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Origin ကပဲဝယ်လည်းရသလို (account လိုလိမ့်မယ်) local ဆိုင်တွေမှာလဲ ရလောက်ပါပြီ (Single-player အတွက်ပေါ့)။ Steam မှာတင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ သူက EA လေ။ ဘာတွေဖြစ်ဖြစ်ပါ Star Wars fan တွေကတော့ မဖြစ်မနေ ဝယ်ဖြစ်ကြပါလိမ့်မယ်။ တကယ်ဝယ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တောင် inferno squad campaign တွေနဲ့တင် ပျော်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင်က seriously rebellion ဖြစ်နေရင်တော့ ရယ် နေမယ်ထင်တယ်။
ဒီထဲက player ကတော့ super-hero မကတော့ဘူး၊ interdimensional superbeing ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ War of the worlds လိုရုပ်ရှင်ထဲက ခြေထောက်သုံးချောင်းနဲ့ ဂြိုလ်သားတွေက သေးသေးလေးတွေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်ရလာတဲ့ power ကို မဆင်မခြင်သုံးရင်တော့ ဂြိုလ်သားရန်က ကိုယ်ကာကွယ်နေတဲ့ လူတွေသေကုန်လိမ့်မယ်။ အချိန်ခဏဆော့ပြီးချိန်မှာတော့ ဂိမ်းက အမိုက်စားဖြစ်ပေမယ့် လိုအပ်ချက်တစ်ချို့တော့ ရှိနေဆဲပါပဲ။ Superman ဆိုပေမယ့် kryptonite တော့ကြောက်တာပဲမဟုတ်လား။ FPS ဖြစ်ပါတယ်၊ လောလောဆယ် discount ရှိနေပါတယ်။
တကယ်ဆိုဒါက ဂိမ်းတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး၊ documentary တစ်ခုအနေနဲ့ပါ။ ဗဟုသုတပေါ့။ စိတ်ဝင်စားရင်တော့ ကြည့်ကြည့်ပါ။ World of Tanks Blitz နဲ့ World of Warships ရဲ့ developer ဖြစ်တဲ့ Wargaming Group ကထုတ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ Season 1 အနေနဲ့ စစ်သင်္ဘာကြီး ၉ ခုရဲ့အကြောင်းပေါ့။ download မလိုပါဘူး၊ streaming ဖြစ်ပါတယ်။ youtube မှာလည်းတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ IOWA အကြောင်း အမြည်းထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒီတစ်ပတ်တော့ဒီလောက်ပါပဲ။ နောက်တစ်ပတ်ကတော့ ပွဲတွေရှိနေတော့ တင်နိုင်ပါ့မလားမသိဘူး။ ကြိုးစားကြည့်တာပေါ့။
အကုနျလုံးကတော့ Steam တဈခုတညျးကပဲမဟုတျတော့ဘူး။ တဈခြို့ အငျအားကွီးတှကေ Steam ကိုထညျ့တှကျတာမဟုတျဘူးလေ။ EA ရဲ့ Star Wars ကိုထညျ့ပေးလိုကျပါတယျ။ ဆော့ဖွဈပါစလေို့ ဆုတောငျးပါတယျ။ multiplayer မရသေးတဲ့ နရောရောကျနခေဲ့ရငျတောငျ single-player ဖွဈဖွဈပေါ့။
Okie… အရငျဆုံးပွောထားမယျ၊ စာရေးသူမှာ ဘာအမှေးမှလညျးပေါကျမလာဘူး၊ gay လို့ပွောရအောငျလညျး အဲ့လောကျတော့မသိသာပါဘူး၊ ဒီဂိမျးက အမှေးထူထူနဲ့… အဲ…. အဲ့ဒီ ကွောငျဝိဉာဉျ ၃ကောငျနဲ့ သှားရမဲ့ ဇာတျလမျးလေးပါ၊ ဇာတျလမျး တဈခုပဲဆော့လို့ပွီးသေးတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဇာတျလမျးကစား သူတှအေတှကျကတော့ ကောငျးပါ၏ ။ နောကျခံ သီခငျြးတှလေညျးမိုကျတယျ။ တရုတျစာဖတျတတျရငျတော့ ပိုကောငျးပါတယျ။ Eng ဘာသာပွနျပေးထားတာလညျး နားလညျလှယျမှာပါ။ Taiwan အကွောငျးလညျးသိရတာပေါ့။
ပဈမယျခတျမယျ ထှကျပွေးမယျဆိုသူတှအေတှကျ ဂိမျးတဈခုဖွဈပါတယျ။ Single-player ဖွဈပွီးတော့ multiplayer ဖွဈလာစခေငျြတဲ့ ဂိမျးလေးတဈခုပါ။ early access တုနျးက ဆော့ထားပွီးသား သူတှလေညျးရှိပါလိမျ့မယျ။ သခြောတာကတော့ လှနျခဲ့တဲ့ လအတျောအကွာက early access နဲ့လကျရှိမှာ အတျောလေးကှာသှားပါပွီ။
တဈခြိနျ 2005 လောကျတုနျးကထှကျခဲ့ဘူးတဲ့ classic မဟုတျပါဘူး။ လတျတလောမှာ microtransition ပွသနာတှနေဲ့ EA၊ စိတျပူနတေဲ့ Disney၊ စိတျတိုနတေဲ့ player တို့ရဲ့ Star Wars Battlefront II ဖွဈပါတယျ။ ဒီမှာတော့ သူ့ရဲ့ official site ကိုညှနျးပေးလိုကျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ Origin ကပဲဝယျလညျးရသလို (account လိုလိမျ့မယျ) local ဆိုငျတှမှောလဲ ရလောကျပါပွီ (Single-player အတှကျပေါ့)။ Steam မှာတငျမှာမဟုတျပါဘူး။ သူက EA လေ။ ဘာတှဖွေဈဖွဈပါ Star Wars fan တှကေတော့ မဖွဈမနေ ဝယျဖွဈကွပါလိမျ့မယျ။ တကယျဝယျဖွဈမယျဆိုရငျတောငျ inferno squad campaign တှနေဲ့တငျ ပြျောပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သငျက seriously rebellion ဖွဈနရေငျတော့ ရယျ နမေယျထငျတယျ။
ဒီထဲက player ကတော့ super-hero မကတော့ဘူး၊ interdimensional superbeing ဖွဈသှားပွီဆိုတော့ War of the worlds လိုရုပျရှငျထဲက ခွထေောကျသုံးခြောငျးနဲ့ ဂွိုလျသားတှကေ သေးသေးလေးတှဖွေဈသှားလိမျ့မယျ။ ဒါပမေယျ့ရလာတဲ့ power ကို မဆငျမခွငျသုံးရငျတော့ ဂွိုလျသားရနျက ကိုယျကာကှယျနတေဲ့ လူတှသေကေုနျလိမျ့မယျ။ အခြိနျခဏဆော့ပွီးခြိနျမှာတော့ ဂိမျးက အမိုကျစားဖွဈပမေယျ့ လိုအပျခကျြတဈခြို့တော့ ရှိနဆေဲပါပဲ။ Superman ဆိုပမေယျ့ kryptonite တော့ကွောကျတာပဲမဟုတျလား။ FPS ဖွဈပါတယျ၊ လောလောဆယျ discount ရှိနပေါတယျ။
တကယျဆိုဒါက ဂိမျးတဈခုတော့မဟုတျပါဘူး၊ documentary တဈခုအနနေဲ့ပါ။ ဗဟုသုတပေါ့။ စိတျဝငျစားရငျတော့ ကွညျ့ကွညျ့ပါ။ World of Tanks Blitz နဲ့ World of Warships ရဲ့ developer ဖွဈတဲ့ Wargaming Group ကထုတျလုပျတာဖွဈပါတယျ။ Season 1 အနနေဲ့ စဈသင်ျဘာကွီး ၉ ခုရဲ့အကွောငျးပေါ့။ download မလိုပါဘူး၊ streaming ဖွဈပါတယျ။ youtube မှာလညျးတှပေ့ါလိမျ့မယျ။ IOWA အကွောငျး အမွညျးထညျ့ပေးလိုကျပါတယျ။
ဒီတဈပတျတော့ဒီလောကျပါပဲ။ နောကျတဈပတျကတော့ ပှဲတှရှေိနတေော့ တငျနိုငျပါ့မလားမသိဘူး။ ကွိုးစားကွညျ့တာပေါ့။
Tags newrelease starwars steam weeklySteam